Kan sameeyey Screensaver - Abuur Screensaver for Your Desktop
> Resource > Top List > Abuur dhaceen Flash Screensaver la Kan sameeyey Screensaver
Wondershare Flash Gallery Factory waa weyn abuure flash slideshow , iyo sidoo kale laga yaabaa in loo isticmaalo iyo sidoo kale ah kii sameeyey screensaver sawir si ay u abuuraan screensaver aamusnaan ah si aad muujin kartid waxa aad hibo hal-abuurka ah ee lagu sameynayo screensaver flash slideshow music iyo ilaaliyo bandhigay screen Dhanka kale .
Ka bilow arrimo la yaab leh ay dhisay-in, waxa aad awoodi kartaa in ay noqon photos iyo music u gaar ah si ay u screensaver desktop gudahood 3 talaabooyin fudud. Waa gaare flash screensaver fudud weli awood leh, waayo, waxaad si loo abuuro screensaver in daqiiqo, oo aadan u baahan in ay wax xirfadaha flash. Halkan waxa aad ka soo dejisan kartaa software this.
1 photos Import iyo music in gaare screensaver
Orod on kii kartoon screensaver sawir. In Browse tab, aad u hesho sawiro aad rabto in aad isticmaasho u screensaver iyo kuwaa oo ka sahamisa in Storyboard ugu hooseysa. Next, Guji "Add Music" button in arbushin ilaa music faylasha dhirtuba uu furmo suuqa. Dooro mid ka mid ah ama files music badan ka dib, guji Open ku darto music loo doortay in ay Storyboard.
Fiiro gaar ah: xabbadood Multiple heesaha slideshow waxaa taageera.
2 Dooro arrimo u flash screensaver
Demi in Template tab on bar sare. Tan waxaan doonayaa in aan abuuro flash screensaver slideshow, waxaan u baahan nahay si ay u tagaan tab Mowduuca u marto flash slideshow ah. Halkan, waxaad riixi kartaa thumbnail template kasta oo si deg deg ah ku eegaan. Ka sokow, waxa aad awoodi kartaa in la qeexo sawir sida asalka ah ee aad screensaver flash slideshow, sida loo isticmaalo ikhtiyaaraadka Image hore ee hoos suuqa kala Xiisaha Leh.
3 naadiya sida screensaver desktop
In naadiya tab, aad daabici yaabaa slideshow flash qaabab kala duwan, oo ay ku jiraan Jabbuuti oo Movie, HTML Page la slideshow flash gundhig, Email Profile, EXE Player iyo Screensaver waxaan rabnaa in aan ka. Waxaa la soo jeediyay in aad si ay u sameeyaan iyo rakibi screensaver ka flash slideshow sida raaceen: 1. Click u samaysaa daah Save button on xaq; 2. Sheeg magacaaga screensaver in screensaver flash ah; 3. Press OK in la abuuro screensaver.
Ka dib markii la abuurayo flash screensaver, Guryaha Bandhiga arbushin doonaa si toos ah. Sida ay tiradaasi hoos ku muujiyey, waxaad ku eegaan laga yaabaa flash ka screensaver abuuray oo qarka u saaran inta ay tahay inay sugaan ka hor inta kaakicin screensaver flash slideshow ah.
Haddii aad daabici screensaver sida Jabbuuti Flash movie iyo Cudarada inay websites, halkan waxaa ku qoran talooyin u screensaver flash slideshow:
- Click image waasiciyo, oo mar kale guji si loo soo celiyo.
- mouse dhaqaaq in la beddelo jihada wareeg ah screensaver flash ah.
- waxay ka durugsan xarunta taagan yahay, si dhakhso ah screensaver uu noqon doono.
- dhaqaaq mouse si hoose ee flash screensaver in la beddelo midabka asalka flash in bar slide-upka.
Top 30 ciyaaryahan mp3 2015